Famoronana Akanjo Ny NS GAIA dia marika vita amin'ny marika ankehitriny avy amin'ny New Delhi izay manankarena ny endrika tokana sy ny lamba vita amin'ny lamba. Ny marika dia mpanohana lehibe amin'ny famokarana saina ary ny zava-drehetra miverina amin'ny bisikileta sy ny fanodikodinana. Ny maha-zava-dehibe an'io lafiny io dia hita taratra amin'ireo andry manonona, ny 'N' sy 'S' ao amin'ny NS GAIA mijoro ho an'ny natiora sy maharitra. Ny fomba fanaon'i NS GAIA dia "kely kokoa". Ny marika dia mitana anjara mavitrika amin'ny hetsika miadana amin'ny alàlan'ny fiantohana ny minimal ny fiantraikan'ny tontolo iainana.
Famoronana Akanjo Ny Marisika Mifangaro Mifangaro Ny Maha-Izy Ireo Orinasa Jiro Ny Sakafo Snack Fonosana Sakafo